Unesifiso sokuba nenkulisa | News24
Unesifiso sokuba nenkulisa
OWESIFAZANE odabuka eMolweni kodwa osezinze eWyebank ngasePinetown, uNks Busisiwe Thusini (55) uthe ufisa umsamariya olungileyo ukuba umlekelele ngokuqala inkulisa njengoba ethi unesiphiwo sokunakekela izingane.
Uthe waqala ukunakekela izingane kusukela ngo-1983.
“Ukugada izingane ngikubona kuyisiphiwo esivela kuNkunkulunkulu. Ngiqale ukugada izingane ngo-1983, ngaleso sikhathi ngangisebenza enkulisa ebizwa ngokuthi yi-Jean Play Glen eseHillcrest bese ngo-2002 ngasebenza enkulisa ese-Kloof eyasungulwa ngu-Allan Artwell, “kusho uNks Thusini.
Uthe emva kokuba asebenze eKloof, uthole omunye umsebenzi wokugada izingane zomndeni wakwaRosman eGillitts. “Ngigade izingane ka Rosman iminyaka emihlanu lapho ngangizi khonze ngendlela eyisimanga. Inkinga yaba wukuthi unina wezingane wathola umsebenzi eGoli kwaphoqeleka ukuthi eyohlala khona nomndeni wakhe,” kusho yena.
Uthe ukuhamba kukaNkk Rosman kwenza impilo ibe nzima kakhulu njengoba athola umsebenzi wase makhishini ePinetown.
Uthe: “Lo msebenzi engiwenzayo wokukilina angiwuthandi neze, ngoba akusiyo into engiphiwe ukuthi ngiyenze, umoya wami awuthokozile ngoba ngiyazi ukuthi yikuphi engiphiwe kukona. La engisebenza khona zikhona izingane futhi zingikhonzile kakhulu ngigcina sengihleli nazo ngizifundisa ukubhaka, ukupheka sidlale ngokudweba senze yonke into eyenziwa esikoleni, ngine sizungu njengoba esephelile amaholide okuvalwa kwezikole,” kusho yena.
Uqhube wathi njengoba esezothatha umhlalaphansi uyafisa ukuthi asebenzele ekhaya abe nenkulisa egcekeni.
Uthe: “Ngingajabula uma kungase kube khona ongangixhasa ngegumbi le nkulisa noma ngabe linye noma ngabe elama plangwe. Ukube imali nginayo ngabe ngiyazakhela. Angiziphakamisi kodwa ngiyalazi ithalente lami ukuthi lilele ekunakekeleni izingane, umoya wami uyojabula mhla kwenzeka lokhu engikufisayo.”
Uthe ngaphandle kokunakekela izingane kuningi okunye akuthandayo kubalwa ukupheka nokubhaka, wathi ungumuntu okholelwa kuNkulunkulu kukho konke akwenzayo. “Ngikhulele emndenini oxakekile njengoba ngashiywa abazali nginemiyaka eyi-16, kodwa sazama ukuphila nezingane zakwethu eziyi sithupha. Manje sengisele nodadewethu oyedwa nezingane zami ezine, ngihlezi ngithi ngifuna izingane zami ziphile impilo engcono kune ngayiphila. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza esifisweni sami,” kusho uNks Thusini.
Uthe uma ngabe kukhona othanda ukwelula isandla axhase ngenkulisa, amathoyizi, izinto zokudweba zezingane noma ngabe yini ephathelene nenkulisa angashayela inombolo ethi: 083 985 8541.
Ngikhulele emndenini oxakekile njengoba ngashiywa abazali nginemiyaka eyi-16, kodwa sazama ukuphila nezingane zakwethu eziyi sithupha. Manje sengisele nodadewethu oyedwa nezingane zami ezine, ngihlezi ngithi ngifuna izingane zami ziphile impilo engcono kune ngayiphila. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza esifisweni sami